Ciidamada Al Shabaab Oo la Wareegay Deegaan Ay Maleeshiyaadka Maamulka Galmudug Uga Sugnaayeen Gobolka Mudug.
Thursday July 05, 2018 - 21:44:57 in Wararka by
Ciidamada Alshabaab ayaa weerar kuqaaday firxadka maleeshiyaad katirsan maamulka Galmudug oo isku uruursanayay fariisin deegaanka Gabdhaale ee dhaca duleedka Caad ee wilaayada Mudug.
Dagaalka oo dhacay barqanimadii maanta ayaa inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay illaa laba katirsan maleeshiyaadka Galmudug halka intii kalena ay duurka ku kala yaaceen.
Ciidanka Alshabaab ayay usuurto gashay in muddo kooban oo u dagaalka socday kadib ay lawreegaan taliskii maleeshiyaadka.
"Sarkaal katiran Mujaahidiinta oo lahadlay idaacada islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in mujaahidiintu ay dul istaageen maydadka illaa 2-katiran murtadiinta iyadoo cadowga laga soo ganiimaystay dhamaan wixii agab ciidan ahaa taliska yiilay" ayaa lagu yiri war ay baahisay Andalus.
Weerarkan Maleeshiyaadka lagu qaaday ayaa wuxuu daba socdaa iyadoo shalay maleeshiyaadka maamulka Galmudug ay weerar ku qaadeen deegaanka Caad halkaas oo maleeshiyaadka lagaga dilay in kabadan 15 oo uu kujiro sarkaalkii hogaaminayay oo lagu magacaabi jiray Goobe Gurey.
Waaliga Wilaayada Islaamiga Mudug Sheekh Cabdu Qaadir Abu Cadnaan oo dhawaan la hadlay Idaacada Andalus ayaa sheegay in ciidamadoodu ay si dhow ula socdaan dhaq-dhaqaaqyada Maleeshiyaad uu ku tilmaamay Murtadiinta ay ka wadaan qaybaha uu cadawgu kaga suganyahay Wilaayada Mudug, ayna si adag uga hortagi doonaan qorshayaasha ashahaado la dirirnimo ee ay gadaal ka riixayso Xabashida Itoobiya iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.